Nepal Auto | बर्षायाममा गाडीको सुरक्षाका लागि यसो गरौं
बर्षायाममा गाडीको सुरक्षाका लागि यसो गरौं 17 Bhadra, 2075
बर्षाको मौसममा गाडी चलाउदा अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी सचेत हुनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । घरबाट निस्कने वित्तिकै यदि पानी परेमा कतै सडकमा फसिने पो हो कि भन्ने डर सधै रहन्छ । बर्षा याम शुरु हुनु भन्दा पहिले नै आफू पूर्ण रुपमा तयारी भएर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ । पूर्व तयारीको अभावले बर्षा याममा तय भएको यात्राका कारण दुःख पाउन पनि सकिन्छ ।
तर केही कुरामा ध्यान दिएमा आफ्नो यात्रा र गाडीको गतिविधि सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
राम्रो टायरको चयन
बर्षामा कतै यात्रा गर्नु पूर्व गाडीको टायर राम्ररी जाचँ गर्नु उत्तम उपाय हो । गाडीको टायर पुरै घिसे्रको छ कि भन्ने जाचँ गर्नुपर्छ । यदि टायरको रबर घिसे्रको छ भने टायर सडकमा चल्न योग्य हुँदैन । यस्तो टायरका साथ बर्षा याममा ड्राईभिङ गर्दा धेरै झन्झट हुन्छ किनकि सडक कतै भिजेको हुन्छ त कतै सडक चिप्लो पनि हुन सक्छ । यस्तोमा गाडीको टायर परिवर्तन गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
कुनै पनि सवारी साधनमा ब्रेकले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । ब्रेक विना सवारी साधनको कल्पना गर्न पनि सकिदैन । आवश्यक परेको अवस्थामा गाडी रोक्ने काम ब्रेकले नै गरेको हुन्छ । कारको अगाडि र पछाडि ब्रेक ड्रम्स हुन्छ । अगाडिको ड्रम्समा ब्रेक प्याड र पछाडी ब्रेक शु हुन्छ । बर्षामा यी दुई ब्रेकको जाँच गर्नु पर्छ । बर्षाको मौसममा गाडीको स्पिडमा नियन्त्रण राख्नु पर्छ र अगाडिको गाडी भन्दा केही दुरी बनाएर ड्राईभिङ गर्नु पर्छ ।
ब्याट्रीको पावर विना कुनै पनि सवारीसाधन चलाउन सम्भव नै छैन । तर समयसँगै र बर्र्षाको कारण ब्याट्रीको आयु पनि घट्दै गएको हुन्छ । बर्षा याममा ब्याट्रीको समय समय निरीक्षण गरिरहनु पर्छ । यदि ब्याट्रीको स्थिति ठिक छैन भने गाडी कतै फसेको खण्डमा गाडीलाई अगाडि बढाउन सकिदैन । ब्याट्रीमा सेतो डिकम्पोजिङ मेटरियल माथि उठेको हुन्छ । यसले स्टार्टिङमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि कारणले ब्याट्रीको स्टार्टिङमा समस्या देखिएमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
गहिरो पानीमा गाडी नचलाउने
गहिरो पानीमा गाडी चलाउनु खतरनाक हुन सक्छ । गाडीको टायर पुरै डुवेको स्थितिमा एयर फिल्टरको माध्यमबाट पानी इन्जिनमा छिर्न सक्छ । जसको कारण इन्जिन जाम हुन सक्छ । साइलेन्सरको माध्यमबाट पानी छिरी गाडीको इन्जिन बन्द गर्न पनि सक्छ । त्यसैले गहिरो पानीमा गाडी चलाउँदा होसियार हुनु पर्छ । यद्यपि आधा मात्र टायर डुबेको अवस्थामा भएको पानीमा विस्तारै गाडी हाँक्न सकिन्छ ।
के हो फोर ह्विल ड्राइभ र अल ह्विल ड्राइभ ? के छ यी दुईमा फरक ?
स्पोर्ट्स बाइक चलाउदा सावधानी.....
कुनै पनि दुर्घटना हुनुमा सवारी साधनको गल्ती हुदैन भन्ने विशेषज्ञहरुको मान्यता रह...